Kedu ihe dị iche na ecommerce na ahịa? | ECommerce ozi ọma
Ọtụtụ ndị kwenyere na ahịa n'ịntanetị na ikpo okwu e-commerce nwere ike ịbụ otu ihe ahụ. Ọ bụ eziokwu na a na-eji ha abụọ maka ebumnuche azụmaahịa n'ịntanetị, mana enwere ọdịiche dị oke mkpa n'etiti ha. Ebe nrụọrụ weebụ e-commerce abụghị naanị otu ụlọ ahịa weebụ, ebe n'aka nke ọzọ, otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ikpo okwu n'ahịa site na enyemaka nke ọtụtụ ndị na-ere ahịa. Ndị a bụ ọdịiche 5 kachasị mkpa dị n'etiti Ahịa na Ahịa Elektrọnik ị kwesịrị ịma:
N'ime ihe n'ezie teknụzụ dị iche iche na-abịaru nso, ọ dị mkpa iji mesie ya ike na azụmaahịa kọmputa na-adị iji nye ọnụnọ azụmaahịa n'ịntanetị ma ya mere ezubere ya. A na-emezigharị ha maka nzube ahụ. N’aka nke ọzọ, ọmarịcha ahịa na-enye ndị na-azụ ahịa otu ụzọ ịzụ ihe niile ha chọrọ. Teknụzụ kwesịrị ekwesị iji jikwaa ikpo okwu ahịa na-adị mgbagwoju anya. Iji maatụ, nyiwe ahịa nke oge a na-akwado ọtụtụ njikọta API na ụlọ ahịa n'ịntanetị na n'ịntanetị.
Nke a bụ ihe a na - akpọ ihe nlere anya dị ka usoro njikwa. Dị ka ahịa anaghị azụ ngwaahịa ọ bụla, ị na -echekarị obere ihe egwu ego karịa ka nrụọrụ weebụ e-commerce webụsaịtị nwere itinye ego mgbe niile na ebuka nwere ike ghara ire. N'ụzọ dị otú a, Ahịa na-enweta akụ na ụba n'ụzọ dị mfe karị, ya mere na-enye ha ohere ịgbasa ngwa ngwa karịa ebe nrụọrụ weebụ e-commerce. Ahịa doro anya na o siri ike wuo, mana ha nwere ike ịdị ogologo oge na-adịgide adịgide ma baa uru ozugbo ha ruru ego.
1 Iji ghọta ahịa
2 Approachzọ ahia na ịchebe
3 Ihe ndị ọzọ dị iche na ha
4 Gịnị bụ ahịa ahụ?
Iji ghọta ahịa
Ma ị na-azụ ahịa ọhụrụ ma ọ bụ na ị na-azụ ahịa kemgbe ọtụtụ afọ, nwetakwuo ahịa ecommerce. Ebe otutu ndi mmadu n'eche na uzo ahia na ebe nrụọrụ weebụ na e-commerce nwere ike ibu otu ihe.
Ọ bụ ezie na ejiri ha abụọ maka ebumnuche azụmaahịa n'ịntanetị, enwere ụfọdụ ndịiche dị n'etiti ha. Dịka ọmụmaatụ, ebe ahịa bụ ikpo okwu dị n'ịntanetị ebe onye nwe weebụsaịtị na-enye ndị na-ere ahịa ndị ọzọ ohere ire na ikpo okwu na ndị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ozugbo, ya bụ, ọtụtụ ndị na-ere ahịa nwere ike ịre ndị ahịa ngwaahịa ha. Onye nwe ọmà ahịa enweghị ngwongwo a, ọ naghịkwa arịọ onye ahịa. N'ezie, ọ bụ ikpo okwu maka ma ndị na-ere ma ndị na-azụ ihe, dịka nke a na-ahụ n'ahịa anụ ahụ.
N'ụzọ dị iche, ebe nrụọrụ weebụ e-commerce bụ otu ụlọ ahịa na-ere ahịa n'ịntanetị ma ọ bụ na-echekwa ọtụtụ ebe ịntanetị ebe otu akara aha na-ere ngwaahịa ya na weebụsaịtị ya. Ndepụta Ngwaahịa bụ naanị ihe onwunwe nke onye nwe weebụsaịtị. Onye nwe weebụsaịtị ahụ na-akwụkwa onye ahịa ụgwọ ma na-akwụ ụtụ isi agbakwunyere. Enweghị nhọrọ ịdenye aha dị ka onye na-ere ere, yiri ihe ị hụrụ na ụlọ ahịa mkpọsa. Ma ọ bụ onye ahịa akọwapụtara nke ọma. A na-akpọ ebe nrụọrụ weebụ e-commerce otu ebe nrụọrụ weebụ na-ere ere ebe onye nwe ụlọ ahịa nwere ike ịrụ ọrụ weebụsaịtị maka ire ngwaahịa.
N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ebe ahịa pụrụ ịbụ ebe nrụọrụ weebụ e-commerce, ma ọ bụghị ebe nrụọrụ weebụ e-commerce bụ ebe ahịa. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka ọgba aghara, ebe a bụ ọdịiche 10 dị mkpa n'etiti ahịa na ebe nrụọrụ weebụ ecommerce ị kwesịrị ịma banyere ya.
N'ezie, ebe kachasị mma ịre n'ịntanetị dị iche na nke onye na-ere ihe na-adabere na ngwaahịa gị, mkpa gị, na ebumnuche gị.
Nke a bụ esemokwu 10 dị n'etiti Ahịa na Ahịa Elektrọnik ị kwesịrị ịma.
Approachzọ ahia na ịchebe
Ọ dị ezigbo mkpa ịnwe echiche doro anya gbasara usoro ịzụ ahịa gị na nghazi gị n'ahịa ịntanetị na azụmahịa e-commerce. Mgbe ị na-azụ ahịa azụmahịa ị kwesịrị ilekwasị anya n'ịchọ ndị na-azụ ahịa, n'ọma ahịa ịkwesịrị ịdọrọ ọ bụghị naanị ndị na-azụ ahịa kamakwa ndị na-ere ahịa ga-abụ obi nke ikpo okwu gị. Na e-commerce, onye ahịa ọ bụla ga-etinyekwu ego iji chụpụ ahịa na saịtị ha.
Ozugbo onye zụrụ ahịa chọtara nhọrọ ha, usoro nhọrọ dị mfe karịa ka ha na-ahọta site na ngwaahịa ndị otu ụlọ ọrụ na-enye. N'aka nke ọzọ, ahịa na-erite uru site na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na saịtị ha. Dika otutu ndi ahia, ha n’otu n’otu na-akpọsa ịdị adị nke ahịa ahụ, na-akpata mgbasa nke nje virus ịmatakwu. Ndị na-azụ ahịa na-enwe obi ụtọ bụ, mgbe ha na-akpọtụrụ na saịtị ahụ, otú ahụ ka ha na-enyere aka ịgbasa mmata ahịa.
Ahịa anaghị ere ma ọ bụ zụta ngwaahịa ọ bụla. Yabụ ị na-ewere nnukwu nsogbu ego karịa e-commerce weebụsaịtị nke na-etinye ego mgbe niile na ebuka nwere ike wepụta oge iji ree ma ọ bụ ree. Dịka e kwuworo, ahịa na-enweta akụ na ụba n'ọtụtụ na-adị mfe ma ya mere na-enye ohere maka mgbasawanye ngwa ngwa karịa ebe nrụọrụ weebụ e-commerce.
Mgbe okporo ụzọ na-eto ngwa ngwa, ọ nwere ike ịdị mkpa ịchọta ndị na-ere ahịa ọhụrụ iji gboo mkpa, mana ị gaghị echegbu onwe gị maka itinye nnukwu ego na ngwa ahịa ọhụụ ma ọ bụ ebe nchekwa.
Ndepụta buru ibu
Buru n’uche na nnukwu ngwa ahịa ahụ, ọ ga-abụ na ndị na-azụ ahịa ga-achọta ihe ha na-achọ. Nnukwu ngwongwo na-apụtakarị na a ga-etinyekwu mgbalị n'ịzụ ahịa iji dọta mmasị nke ndị ọbịa gị, ọbụlagodi na ha nwere mmasị na weebụsaịtị.
Principlekpụrụ Pareto, nke a makwaara dị ka iwu 80/20, na-etinye aka na mmepe nke ahịa, ebe obere ngwaahịa ga-agbakwunye n'ọtụtụ ahịa. Mgbe ụfọdụ ịdebe ngwa ahịa ka ukwuu na ngwaahịa nwere ike ibute nsogbu ịchekwa ihe ọzọ ga-ere nke ọma. Na e-commerce weebụsaịtị, ụkpụrụ Pareto pụtara na ị ga-ekpochapụ ngwaahịa ndị a na-ereghị n'oge ụfọdụ, na-ebelata ọnụahịa ha. N'aka nke ọzọ, na ahịa, ọ bụrụ na enwere ngwaahịa anaghị ere ere, ị nwere ike ịhọrọ imebi ya site na ịpị bọtịnụ. Ebe ọ bụ na ị zụbeghị ngwaahịa ndị a, enweghị ụgwọ metụtara ya.
Oge na ego
Iwulite webusaiti nke gi ecommerce nwere ike idi nfe ma o bu gbagwojuru anya gi. Enwere ọtụtụ nsogbu na ya. N'ihi ya, a ga-enwe oge buru ibu na ịrụ ọrụ iji mepụta ma debe ebe nrụọrụ weebụ e-commerce gị. Mana n'ahịa, ebe ihe niile na-adị njikere, ị nwere ike ịdebanye aha, depụta ma ree n'emeghị oge buru ibu na ọrụ ndị ọzọ.
Ọzọkwa, dị ka ebe nrụọrụ weebụ ecommerce nwere nnukwu ego mbụ, ha na-ewe ogologo oge karịa imebi. N'aka nke ọzọ, ahịa nwere oke uru oke ego ebe ọ bụ na ego ha na-enweta bụ pasent nke azụmahịa. Dabere na olu azụmahịa, nke a bụ ego a na-enweta nke na-agbanyekarị ego na mmepe ngwaahịa iji mee ka uto dị ngwa.
A olu azụmahịa
Na ahịa, oke dị na ire ọ bụla dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere ahịa e-commerce. Nke a bụ tumadi n'ihi ego ọrụ ana-ewepụ n'ahịa. N'ihi ya, ahịa kwesịrị ire nnukwu ngwaahịa nke ngwaahịa karịa azụmahịa e-commerce.
Indicatorsdị ihe ngosipụta
E nwere ihe ngosi na-egosi na a na-eji achọpụta ọnọdụ na ahịa ahịa. Ha na-arụtụkwa aka n’usoro njem ọnụ ahịa ahụ. Site n'enyemaka nke ndị na-egosi ihe na-emekarị, ahịa nwere ike ịkọwapụta ahịa gị. Ha makwaara nke ngwaahịa kachasị mma na ndị na-ere ahịa kachasị arụ ọrụ. Dịka nsonaazụ, ịnwere ike ịme usoro kachasị mma ma dị irè iji were ma kwalite ọdịnaya dị ndị ọrụ gị mkpa n'ezie.
Ike ndị mmadụ dị oke mkpa na azụmaahịa ọnlaịnụ, ọ bụ n'ahịa ma ọ bụ na weebụsaịtị e-commerce. Ndị ahịa na-abụkarị ndị azụmahịa na ihe mgbaru ọsọ bụ ijikọ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa. Ahịa na-elekwasị anya kpamkpam na ndị na-azụ ahịa ịzụta na ndị na-ere ahịa ịgụnye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ. N'ezie, ahịa na-erite uru site na nsonaazụ netwọk: ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-adọta ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ntụgharị.
Dọta ndị na-ege ntị na azụmahịa e-commerce siri ike. Ọ na-eri oge ma dị oke ọnụ. Ọbụlagodi na ị nwetara ahụmịhe, ị ka nwere ike na-achọ ndị na-adịghị mma. Usoro mgbasa ozi dị iche iche dịka Facebook nwere ike ịga ogologo oge n’ịdọta ndị na-ege ntị.
Iwulite ntụkwasị obi na ahịa ma e-azụmahịa bụ ihe dị mkpa ka ị nwee ike ire n'ịntanetị. Ndị ọrụ gị kwesịrị ịtụkwasị obi na nyiwe gị na ndị ọzọ. 67% nke ndị ahịa tụkwasịrị obi zụta n'ahịa a maara, ọbụlagodi na ndị ahịa na-ere ngwaahịa amaghị. Ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa nwere ahụmịhe afọ ojuju, 54% ga-azụta n'otu ahịa ahụ ọzọ, ntụkwasị obi bụ akụkụ bụ isi nke ahụmịhe a. Na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce, ọ na-esiri ike dị ka otu onye na-achịkwa ma ọ bụ nwe ya.
Ka ọ dị ugbu a, n'ahịa, e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwá ọrụ iji wuo ebe nrụọrụ weebụ e-commerce na nke kacha mara amara bụ SAP Hybris, Salesforce Commerce Cloud ma ọ bụ Magento. Ahịa na-enye ndị na-azụ ahịa otu ụlọ ahịa ịzụta ihe niile ha chọrọ. Ya mere, a na-ahazi azịza nke ahịa site na mbido iji gboo mkpa ụfọdụ nke ndị na-azụ ahịa na ndị ọrụ ahịa.
Akụkụ teknụzụ nke iwulite ahịa ga-abụrịrị iche. Ọ ga-enyerịrị API dị ike (mmemme mmemme ngwa), bụrụ sọftụwia dabere na igwe ojii nke na-enye ohere oge mmejuputa oge, yana nwee nchekwa data nwere ike ịhazi maka ojiji n'ọtụtụ ahịa. Ngwọta ahịa ọgbara ọhụrụ dakọtara na teknụzụ ọwa omni; na-eme ka ọwa mmiri nke ụlọ ahịa ahụ, weebụ, mmezu ya na azụmahịa na-elekọta mmadụ na otu ikpo okwu.
Ntugharị mgbagwoju anya
N'ahịa, a na-ahazi ngwaahịa ndị a haziri nke ọma n'ihi na ọtụtụ ndị na-ere ahịa nwere ndepụta nke ngwaahịa ha. Ma, na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce, nhazi nke ngwaahịa dabere na edemede. Enwere otutu ihe zuru ezu ma ya mere nzacha nke ọma maka ụlọ nyocha, nke pụtara na onye ọrụ nwere ike nụchaa ọchụchọ ha karịa. Yabụ, na usoro nke usoro nchọgharị na usoro, enwere nnukwu ọdịiche.
Ihe ndị ọzọ dị iche na ha
Ebe a na-azụ ahịa bụ ebe ikpo okwu e-commerce dị, ma ọ bụghị ebe e-commerce niile bụ ahịa. Ya mere, olee ọdịiche dị n'etiti saịtị ecommerce na ahịa? Ndị a bụ ndị isi iji nyere gị aka iduzi gị na njem gị na ahịa:
Isi ihe dị iche n'etiti ebe e-commerce na ahịa ahịa ahịa
1.Small ego, nnukwu ikpo okwu
Ecommerce website: Ibido weebụsaịtị ecommerce na-achọkarị itinye ezigbo ego n'ihu iji dọta ndị na-azụ ahịa nnukwu ego.
Ahịa: Mgbe a bịara n'ahịa, ị nwere uru nke ikwe ka ndị na-ere ahịa jikwaa ngwaahịa ha n'onwe ha, nke ga-ebelata mbido ego gị. Ahịa nwere ike ịkọwapụta ngwaahịa karịa saịtị ecommerce ebe ọ bụ na nchịkọta ngwaahịa si n'aka ọtụtụ ndị na-ere ahịa. Ọ bụ ezie na ọnụahịa nke ibupụta ebe ahịa siri ike dị ka ebe ecommerce na-azụ ahịa, ịdị mfe nke ahịa dị ọtụtụ karịa.
2 oke ahia
Maka Ahịa: Site na nnukwu ngwa ahịa na ahịa, ndị ahịa nwere ike ịchọta ngwaahịa ha na-achọ ngwa ngwa. Agbanyeghị, nnukwu katalọgụ ga-achọ mbọ karịa n'ịzụ ahịa.
Maka ebe nrụọrụ weebụ e-commerce: Na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce, ịkwesịrị iwepụ ụfọdụ ngwaahịa ndị a na-ereghị ma ọ bụ belata ọnụahịa ha n'oge ụfọdụ, dịka ịchekwa ha na ngwaahịa ga-egbochi gị ịchekwa ihe na-ere karịa.
N’ahịa, ị nwere ike iji otu pịa kpochapụ ngwaahịa a na-ereghị ere. Dịka ị zụghị ngwaahịa ndị a, enweghị ụgwọ metụtara ya.
3. Nnukwu na mgbagwoju anya
Ahịa na-eweta ndepụta ngwaahịa site na ọtụtụ ndị na-ere ahịa, mana ahaziri ya na katalọgụ a haziri ahazi, yana nkọwa karịa karịa weebụsaịtị e-commerce. Ya mere, ọ na-achọ sistemụ nchọgharị emebere nke ọma yana ihe nzacha ọchụchọ na-enye ndị ọrụ ohere ịmezi ọchụchọ ha nke ọma.
4.Positive ego eruba
Ecommerce: Ebe nrụọrụ weebụ Ecommerce meworo ka itinye ego dị elu na mbụ, ego ha na ego ha ga-ewe ogologo oge.
Ahịa: Ahịa na-enwe oke oke uru dị ka ego ha nwetara sitere na pasent azụmahịa. Dabere na olu azụmahịa, ego a na-enweta na-agbanyeghachi na mmepe ngwaahịa iji mee ka uto dị ngwa.
Ahịa na-enye ọtụtụ ngwaahịa dị iche iche. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị nrụpụta dị iche iche na-ere n'otu ikpo okwu ahụ, enwere ọtụtụ dịgasị iche ịhọrọ karịa na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nkịtị na obere ụdị ụdị. Ọzọkwa, ndị obere azụmaahịa na-ejikarị ahịa eme ihe iji ree ngwaahịa ndị aka abụọ, yabụ atụmanya ahịa ga-adị ala.
Taa, enwere ọtụtụ ngwọta ejiri wuo ebe nrụọrụ weebụ e-commerce dị n'ahịa, dị ka SAP Hybris, ma ọ bụ Magento bụ ndị kasị ewu ewu. Omume ahịa na-agbanwe mgbe niile yana ọganiihu ya na-eto kwa ụbọchị.
Gịnị bụ ahịa ahụ?
Okwu ahia ahia sitere na njikọ nke okwu abuo na Bekee:
Ahia, nke putara ahia
Ebe, nke bu ebe.
Ya mere, enwere ike ịghọta ya dị ka ebe ịzụ ahịa, ụdị ngosi ngosi ngosi nke na-enye ndị ahịa ngwaahịa sitere na ụdị ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị iche iche.
N'ịtụle eluigwe na ala nke azụmahịa kọmputa, ihe nlereanya a na-arụ ọrụ dị ka ọnụ ahịa azụmahịa. Ma, e nwere ihe dị iche n’etiti ha.
Ecommerce nwere ike ịghọta dị ka a mebere ụlọ ahịa, ahụkarị nke a ụfọdụ ika ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ọ na-eji echiche B2C, nke metụtara onye ahịa na ụlọ ọrụ ozugbo.
Ya mere, ecommerce ga-abụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke na-ere naanị ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya.
Mana ahịa bụ nzukọ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na otu ikpo okwu.
Ihe atụ kachasị mma ịkọwa ya bụ ụlọ ahịa, mana na gburugburu ebe obibi.
Ihe nlere a, na mgbakwunye na itinye ndị ahịa na kọntaktị na ngwaahịa sitere na ụlọ ahịa dị iche iche, na-enyekwa azụmahịa aka n'etiti ụlọ ọrụ ndị metụtara, n'ihi na ọ na-eji, n'etiti ndị ọzọ, Business to Business and Business to Consumer or B2B2C.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Kedu ihe dị iche na ecommerce na ahịa?
Ezi nkọwa, agbachitere m ịchọta ihe ngwọta sitere na ụlọ ọrụ Mitsoftware a na-akpọ Mit n'ọma ahịa, ebe m nwere ike ree ngwaahịa m ma ọ na-atọ ụtọ n'ihi na m nwere ike ịzụta azịza a yana atụmatụ ọ na-enye m dị ezigbo mma.
Zaghachi Karina Gastiulmendi